Kunzima yokugcizelela ukubaluleka komoya. Kuyadingeka kokubili ekhaya nasemsebenzini. Ngokuvamile umoya izakhiwo ezifana emafulethini zokuhlala kanye nezindlu, izakhiwo zezimboni (workshop, isitshalo), kanye amakamelo yokusebenza, amahhovisi, emafektri nokuningi. Kunoma ikuphi, it is a imfanelo edingekayo kuyo yonke indawo lapho okuthile kugcinwa noma abantu, futhi kukhona kungenzeka ukuvuza izinto eziqhumayo noma enobuthi. Kodwa kuyilapho ezimweni eziningi ukusetshenziswa ukupholisa zemvelo, namuhla ethandwa jet ukupholisa umoya bafudumale. Yilokho ngakho, sizobe ukukhuluma ngazo kulesi sihloko.
Izici of ukupholisa yemvelo
ukupholisa Zesayensi Ezingesilo iqiniso, ngaphandle kokungabaza, muhle, futhi kunezinzuzo ezithile. Ngokwesibonelo, akukho isidingo eziyinkimbinkimbi ukufakwa umsebenzi amadivayisi yayo. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo ukupholisa kudinga utshalomali ezincane noma engenazo nhlobo. Ukunyakaza kwabantu noma izithunzi emoyeni kulokhu olunikezwa umehluko lokushisa endlini nangaphandle. Lokhu kuveza iphuzu, futhi egumbini emoyeni edonswa iziteshi mpo noma etshekile. Umoya kungaba ngokuphawulekayo ukusiza kakhulu kuyashesha inqubo. Lelikamelo emoyeni ongena ngesango iziteshi ekhethekile. Ngaphambili, babengakholwa, Ngakho-ke, ukugeleza sidlula izikhala amafasitela nezicabha bengena. Kodwa ukuphumelela kwalesi ukupholisa akusho ngaso sonke isikhathi ekulindele. Lokhu kungenxa yokuthi ke kuncike izimo zezulu, engesiyo eqinile eceleni kwakhe. Noma kunjalo, kahle ukukhwezwa moya air evuthayo uyakwazi ukuxazulula le nkinga. Manje siyaqonda, kungani.
Izinzuzo ukupholisa ngenkani
Ngiyavuma, uma sinawo amandla wokulawula ukugeleza komoya ekungeneni futhi siphuma kulelo gumbi, ke kungani kungenjalo ukudala indawo ngokunethezeka imisebenzi yezebhizinisi noma yokuzijabulisa? Kodwa kumelwe siwaqonde ngokuthi kukhona yemvelo supply umoya omncane, futhi buye baphoqa. Sinesithakazelo kakhulu yinzondo nobugovu, njengoba ukusebenza kahle yayo ephakeme, ikakhulukazi esikhathini ebusika. Kodwa kulokhu ukupholisa obudingekayo emoyeni evuthayo njengoba fan elula uyokhulula emoyeni aqandayo. Ngokuvamile kukhona izidingo ezikhethekile umoya ohlanzekile. Kufakiwe imishini ezengeziwe abakwazi kuphela ukuhlanza, kodwa futhi humidify futhi ukuxoxa. Asizwise lokhu yini ophoqelelwe ukupholisa umoya Ukushisa, iziphi izici zayo nendlela ukufakwa wenziwa. Lapha kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amaningi ngakho kubalulekile futhi imininingwane odinga ukukwazi wenze.
Central nokushaya komoya ngabanye
Kufanele kuqondwe ukuthi indlela ukufakwa ukupholisa kuncike hlobo yayo. Central yakhelwe air e sonke isakhiwo. Ngokwesibonelo, ehholo ukukhiqizwa noma ehhovisi elikhulu. Kulokhu, uhlelo uhlobo-ukubeka ezingaba akhonze zonke izindawo isakhiwo. Kodwa kulokhu ukufakwa kufanele kwenziwe ochwepheshe imodi ikhishiwe. Noma yimuphi iphutha kuholela yokuthi nekusebenta ukupholisa iyonke kuyehla. Ezinye amakamelo ungathola emoyeni ezingaphezu kuka udinga kunabanye.
Idivayisi ukukhonza eyodwa noma ngaphezulu izakhiwo kulula. Lolu hlobo ukupholisa igibele endaweni eyodwa isiqeshana, ngenxa yomsindo ezingeni fan is kakhulu ziyancipha. izinhlelo ezinjalo athandwa kakhulu futhi uzokwazi ukufaka kubo ngisho lutho.
Kungani isidingo valve ukupholisa?
izinhlelo eziningi, abanalo ingxenye nhlobo. Ngokwesibonelo, umoya omncane yemvelo akuhloselwe ukufaka imishini enjalo. Ngezikhathi ezithile fan ifakiwe, okuholela umsebenzi amandla umoya, kodwa ukusebenza yayo sezulu ezolile, usecela zero. Futhi nakuba valve uqobo futhi iyingxenye ukupholisa, kodwa isethwe phezulu ewindini plastic. Sicela uqaphele ukuthi kuyinto amafasitela evaliwe, ngoba ukugeleza sokhuni emoyeni futhi ukufingqa, isikhunta ngeke kwakhiwa.
Kuzo zonke izimo, ukufakwa wenziwa uzimele ewindini, wenza PVC impahla. Ngaphezu kwalokho, yobunzima yayo kuyelelwe bonyana akukafaneli kuphulwe, ngakho kunomsindo sihamba izohlala ezingeni elifanayo. Ngokuvamile, umgodi yamba ku umqhubi ekhethekile engxenyeni engenhla uzimele. Ukufakwa engenziwa enkulu ekwakhekeni ewindini namanje ku esitolo, ngakho kakade umkhiqizo osuphelile. Kulesi umphini ukupholisa igibele kudinga kokukhipha ingilazi amayunithi. Lena esivumelana kakhulu futhi kuwusizo.
Izinzuzo valve ukupholisa
I plus eziphawuleka kakhulu, okuyinto mangisho wokuqala nomkhulu kunabo bonke, wukuqinisekisa emagcekeni umoya ohlanzekile. I inflow ehlaba umxhwele futhi kuze 30 cubic metres of air ngehora. Kodwa ngisho ne enjalo ngezinga eligcwele lokushisa ukuhlukahluka kuyaqedwa, ikakhulukazi uma usebenzisa fresh ukuzwakalisa emoyeni bafudumale. Kuyefana nasendleleni ezifana uhlala ezibalulekile njengoba nomswakama. Okusalungiswa nazo ngingekho, ngakho ungesabi umkhuhlane. Ngemva kwesikhathi esithile uzophawula ukuthi ukufingqa ayisekho kwakhiwa, kodwa isikhunta singase sikhohlwe zonke. Ngakho ukusebenza iwindi, ezifana umsindo ukushisa kanye ukwahlukanisa, zihlala zinjalo. Uma usebenzisa uhlelo elula ngaphandle amalahle emoyeni (heater), akusiyo ukuxhumana kwenethiwekhi liyadingeka. Kulesi ukuvulwa valve cishe ezingabonakali, njengoba kwenziwa nombala ofanayo njengoba ifreyimu window.
okunye mayelana ukupholisa Okuthile
Okwamanje kukhona 4 izinhlobo ukupholisa isikhala. Bonke bangabangasokile mechanical ezahlukene kahle futhi izindleko ukufakwa. Ngakho, supply and qeda ukupholisa nge inflow evuthayo njengomgijimi ophelele kakhulu. zako amanga neqiniso lokuthi, kuye ngokuthi yisiphi isikhathi sonyaka emoyeni womile, ke selehlile. Ngokuvamile, ushintsho nemingcele esebenzisa emaphakathi air conditioner. Kodwa heater yesimanje ukubandakanya inani elikhulu imisebenzi. Ngokwesibonelo, ihlanze umoya kuyinto cishe ngo wonke amamodeli. Isebenzisa isihlungi ekhethekile edingekayo ukushintsha njalo.
Kafushane ku izindleko
Ukudala isimo sezulu evamile emafektri, izakhiwo zezimboni kanye nezinye izikhungo, ezifana izikole, imitapo yezincwadi, izibhedlela, kungcono ukusebenzisa ukupholisa nge evuthayo noma umoya opholile. Kulesi ukufakwa emizini yabazalwane noma ezindlini amasistimu kungabangela ingihlupha. Okokuqala, lokhu kungenxa izindleko aphezulu imishini kanye ukufakwa. Namuhla, intengo ohlabayo ukupholisa izinhlelo nge air Ukushisa iqala engama-ruble angu-40 000. Kufanele kuqondwe ukuthi uhlelo ifakwe Ukushisa isici, isihlungi nezinzwa, okuvumela ukucacisa lokushisa egumbini kanye nesidingo ukushisa noma ukupholisa umoya. Imishini isebenza kwimodi okuzenzakalelayo. Okufanele ukwenze - iwukuba njalo ukushintsha isici zokuhlunga.
ukupholisa Ukufaka air Ukushisa endlini kufanele kwenziwe ochwepheshe. Okokuqala, le mishini eyinkimbinkimbi akulula kangako ukukhweza. Okwesibili, kubalulekile ukuba ulungise inzwa, okuyilona elisebenzayo futhi kwenziwa amakhosi. Ngokuvamile, intengo ukufakwa imayelana 10% yezindleko imishini. Ngokwesibonelo, uhlelo ukupholisa "Domvent" kuthandwa kakhulu. umakhi Domestic ukhiqiza izinga valve, okuyinto Kuningi ongakwenza eziningana obandayo. Ngaphezu kwalokho, ayibizi, futhi usefuna ukuthethelelwa ukubuyekezwa abathengi, izinga muhle kakhulu. Empeleni, konke lokhu ungakwazi usitshele ukupholisa ngempoqo Ukushisa (Ukupholisa) ukugeleza. Njengoba ubona, uhlelo siyasebenza kakhulu, kodwa izindleko zabo kwenza uzibuze.
Metal umtshina igolide ekuhlaziyeni, izinhlobo, imiyalelo kanye impendulo